Mineralnye Vody - Izolo Futhi Namuhla
Amaminerali amanzi - eziqhenya laseStavropol Territory, sokuqondisa yasesiFundeni. Mineralnye Vody kuyinto 130 km kusuka laseStavropol, esigodini eMfuleni Kuma. Nangu sezindiza ngobukhulu eningizimu yeRussia. It uxhuma esifundeni zaseCaucasia Mineral Amanzi ne izifunda kanye ezifundeni yezwe. Mineral Water ku unyawo inyoka entabeni, ingxenye embozwe ukhuni, kanti enye ingxenye yaba uyidwala. Ngaphansi evumayo izimo zezulu komuzi ungabona umbono kweNtaba Elbrus.
amanzi City amaminerali eladabuka ukwakhiwa Rostov-eVladikavkaz ujantshi. Small okuyinkimbinkimbi yokuhlala uthola "Sultanovsky" isihloko emzaneni ngo-1878. Ekuqaleni kwekhulu XX, kukhona amabhizinisi, umsebenzi eyinhloko isizinda kanye ukucutshungulwa izinsimbi non-metallic. Isikhumulo sezindiza esisha esakhiwa ngo-1925, kuye kwaba uphawu entsha emlandweni edolobheni, isimo eyamukelwa ngo-1922. Umuzi isibe omunye izinto ezibaluleke kakhulu komugqa emoyeni zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Phakathi neMpi Yezwe II Mineral Amanzi ezinkulu edolobheni laseStavropol Territory.
Manje, amaminerali amanzi - abantu abangaphezu kuka-75 eziyinkulungwane ezivela ezizweni ezihlukene ezingu, nge predominance of Russian. Lo muzi ubizwa kakhulu athuthukile isiko, kukhona amasonto abasezinkolweni ezingefani, izikhumbuzo eziningi emlandweni. Lo muzi ubizwa ngempumelelo ekuthuthukiseni amakhono kwezamabhizinisi ibhizinisi. Lezi izimboni zivame kakhulu isihambile ngokusebenzisa ebhodini lezaziso amaminerali Lamanzi. Mineral Amanzi abe uhlelo oluhle lwemfundo.
Umuzi ingqalasizinda evuthiwe, okuyinto enomthelela ukuthuthukiswa kakhulu sabo enkabeni yedolobha bakhangisa umnotho walo. Entrepreneurship ungumholi e Mineralnye Vody. izimo ezikahle kwalolu hlobo kuphela umsebenzi ukuheha osomabhizinisi abancane imfundamakhwela. Kubo, zonke izimo ukukhuthazwa ibhizinisi labo, ikakhulukazi angathanda ukubalula yokuthi umuzi has zayo siqu umyalezo ibhodi Ming-amanzi. Ibhodi electronic siyasebenza, it is wavakashelwa inombolo nenqwaba yabantu. Ushisa sengathi abaningi banesithakazelo kakhulu ekuthuthukeni kanye nokuhlinzekwa kwemisebenzi yabo, lapha ungathola amakhasimende njalo, noma okuphambene nalokho, eyolanda umqashi njalo kanye nenhlangano ngawo eningabambisana.
Ngakho, kungashiwo kuqashelwe ukuthi amanzi amaminerali - kuyinto abasha, ezikhulayo muzi ngokungquzula umnotho omuhle oqine nengqalasizinda.
Rolko: yini umdlalo Ekwenza Umlingiswa?
Umuntu inhlonipho - lokho? Quality umfowethu onomoya ophansi
Amagama Isilinganiselwa. Khetha igama zengane
Ropsha Palace: Legends. Lo mqeqeshi owake wapheka esigodlweni Romanovs e Ropsha
Remedy Garnier ( "Garnier") "isikhumba Clean 3 1": Izibuyekezo
Yiziphi izigaba zokushayela e-Ukraine
Umoya Wokungenisa Izihambi - Umoya Wokungenisa Izihambi ukuphathwa kuyinto .... imiqondo Basic nezincazelo
Pauline laseDibrova: Biography of the nonkosikazi we showman abadumile Russian
Kwenhliziyo zone. Formula ephephile kwenhliziyo ngesikhathi sokuqeqeshwa. Ezemidlalo Wristband
Dzhim Kerri: Biography of the ethandwa nomdlali wamabhayisikobho waseMelika. Umlando Omfushane Dzhima Kerri
Grem Dzhoys: Biography, izincwadi, izithombe
Perfume Lanvin - ukunambitheka yowesifazane yangempela
Nuking: imishini ukunitha kanye yezinzuzo zale nqubo